FANAHINIANA SA TSY FAHAMATORANA ? : Napetaka tao amin’ny toeran’ny kandida faha-13 ny afisin’ny faha-14
Nanaitra ny mpandalo ny zava-nisy teo amin’ny toerana fametrahana afisy fampielezan-kevitra anoloan’ny biraon’ny firaisana Ankirihiry Toamasina ny marainan’ny alarobia 10 oktobra lasa teo. 11 octobre 2018
Ny faritra natokana hametrahana ny afisin’ny kandida laharana faha-13, Andry Rajoelina, dia nametahan’ny mpametaka afisin’ny kandida laharana faha-14, Eliana Bezaza. Nipetraka ny fanontanian’ny maro hoe fanahiniana natao sa tsy fahamatoran’ny mpametraka afisy ? Tokony hanome toro-marika mazava an’ireo mpiara-dia aminy ny kandida tsirairay mba hialana amin’ny tranga tahaka izao niseho tao Toamasina izao.